Xaaladda Dhaqaale ee Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda Dhaqaale ee Iswiidhen
Publicerat torsdag 20 januari 2011 kl 10.19
War-bixin laga soo xigtay hayadda wada-shaqeeynta dhaqaalaha ee OECD ayaa caddeeysay in kobaca dhaqaale ee dalka Iswiidhen uu sannadka gaari doono 3,9 boqolkii, iyo sidoo kale in sannadka ee xiga 2012 uu noqon doono 3,4 boqolkii, halka uu sannadkii tagay ee 2010 uu gaarsiisnaa 5,2.
Muddadii uu caalamku ku jiray xaaladda dhaqaale ee cakiran ayay hayaddu sheegtay i dalkan Iswiidhen dhaqaalihiisu ahaa mid nuxur leh. Waana mid loo baahan yahay in hoggaanka Iswiidhen uu dib ula laabto hoowlihii dhiiri-gelinta kobcinta dhaqaale sida ay hayaddu sheegtay.
Hayadda ayaa sidoo kale soo jeedisey in bankiga qaranku halkiisa kas ii wado kor u qaadida ribada iyo in dawladdu joojiso tallaabooyinka taageerada ee bankiyada. Hase yeeshee waxaa caqabadi ka aloosan tahay sida ay sheegtay hayadda OECD iyadoona digniin ka bixisay heerka shaqa-la’aanta bulshada dalka. OECD ayaa ku qiyaastay shaqa-la’aanta dalka ee sannadka 2012 dadyoow gaarsiisan 7,5 boqolkii halka ay iminka ka tahay 8 boqolkii.